युएईमा ब्युटिपार्लर व्यबसाय गर्ने नेपाली युवती भन्नुहुन्छ: बुझेर आउनुहोस्, खाडीमै पनि सम्भा’वना प्र’शस्त छन् – नेपाली सूर्य
December 4, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on युएईमा ब्युटिपार्लर व्यबसाय गर्ने नेपाली युवती भन्नुहुन्छ: बुझेर आउनुहोस्, खाडीमै पनि सम्भा’वना प्र’शस्त छन्
आगन्तुक खरेल,ब्युटीपार्लर व्यवसायी, यूएई । मानिसपिच्छे परदेशिनुको कारण फरक फरक हुन्छ । कोही दुः’ख पार लगाउन परदेशिन्छन् त कोही सुन्दर भविष्यको कल्पनामा । म परदेशिनु पनि एक परिस्थिति थियो । नेपालमा भू’कम्प गयो । नेपालमा गरिरहेको व्यवसायमा त्यसको ध’क्का लाग्यो । त्यसको असर परिवार र सानी छोरीमा पनि पर्यो । अनि म र मेरो श्रीमानले यूएई आउने नि’धो गर्यौं । त्यति लामो समय बसिएला भन्ने त थिएन त्यो बेलामा ।
करिब दुई वर्ष उतै बसौं भनेर हामीले सुरुमा योजना बनाएका थियौं । तर यहाँ आएपछि परिस्थिति फरक भइदियो । यहाँको वातावरणले हामीलाई लोभ्यायो । खाडीको देशमा के होला कसो होला भन्ने नभएको हैन । तर यहाँ पनि गर्न सक्ने कुराहरु धेरै रहेछन् । मेरो यहाँ ब्युटीपार्लर व्यवसाय छ । राम्रो चलिरहेको छ । आफूले आफ्नो काम राम्रो गरेपछि भगवानले पनि हेर्छन् । तर त्यसो भन्दैमा सबै यसै हुन्छ भन्ने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा लगनशील हुनुपर्छ । मैले पनि ठूलो मेहनतले नै यो व्यवसाय खडा गरेको हुँ । यहाँ म आफू मात्र होइन, अरुलाई पनि काम दिन पाएको छु ।
मैले नेपाली र फिलिपिन्सका नागरिकलाई काम दिएको छु । मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, चाहे आफ्नै देशमा गर्नुस् या बाहिरको देशमा गएर गर्नुस्, कुनै पनि काम सजिलो छैन । पहिले म संगितको क्षेत्रमा थिएँ, त्यहाँ पनि कतिपय तनावका कुराहरु हुन्थें । काम गाह्रो त हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो हातमा हुन्छ । नेपालबाट यहाँ आएर काम गर्न मलाई खासै सम’स्या त भएन । मेरो श्रीमान् पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हामी परिवार नै साथमा भएका कारण खासै सम’स्या भने भएन । भएका अप्ठे’रालाई पनि हामी मिलेर नै पार लगाउँछौं ।
संसारको जुन कुनामा जुन पदमा पुगे पनि हामीले आफ्नो धरातल बिर्सन हुँदैन । आफू कुन देशबाट आएको, आफ्नो संस्कार के हो भन्ने कुरा यदि बिर्सिनुभएको छैन भने खाडीमा तपाईंले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । तर यहाँ आइसकेपछिको सम’स्या भनेको यहाँ धेरै कुराले परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा आफू को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ भन्ने कुरा बिर्सने कारण पनि सम’स्या हुने गर्दछ । परदेश आइपुगेपछि सम’स्यामा पर्ने कारण एक मात्र छैन । तर पहिलो कारण हामी आफैं हौं । किनभने हामी आफैं परदेशका बारेमा शिक्षित नभइ आउँछौं ।
सरकारले पनि आफ्नो नागरिकलाई विदेश पठाउनुभन्दा पहिले राम्रोसँग दक्ष बनाएर पठाउँदैन । के कामको लागि जाँदैछु, किन जाँदैछु भन्ने पनि थाहा हुँदैन । गाउँको १८ वर्षको एउटा केटीलाई ल्याएर अर्काको देशमा कसैको घरमा लगेर राखिन्छ । उसलाई न त यहाँको भाषा नै थाहा हुन्छ, न त अंग्रेजी नै बोल्न आउँछ, न अरेबिक । केही हुँदा उसले आफ्नो कुरा राख्नसमेत सक्दैन । स’मस्याको मुख्य जड यही हो । त्यसैले यसबारेमा सरकार र जो परदेश आउँदै हुनुुहन्छ उहाँहरुले सोच्न आवश्यक छ ।
यही देशमा विश्वका कति देशबाट आएर काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रै देशकोभन्दा अरु देशबाट आएका नागरिकले किन बढी तलब पाउँछन् भन्दा उनीहरुको हातमा सीप र साथमा ज्ञान हुन्छ । सरकारले नै तालिम दिएर पठाएको छ । स’मस्या यहाँ आउने श्रमिकको होइन, नेपाल सरकारको र म्यानपावरको हो । म्यानपावरले बढी पैसा लिइदिने । यहाँ आएर सात आठसयमा काम गर्नुपर्ने, त्यही पनि नराम्रो काम गर्नुपर्ने । त्यसरी त उसले कहिले ऋ’ण तिर्ने ? कहिले पैसा कमाउने ?
यहाँ आउने नेपालीहरुलाई सामान्य तालिम पनि दिएको हुँदैन । ओभन चलाउन आउँदैन, वासिङ मेशिन पनि चलाउन आउँदैन । घरेलु काममा आउनेले त्यो चलाउन नजान्दा घरमा गा’ली खानुपर्छ । सरकार वा म्यानपावरले आफूले पठाउने मान्छेलाई किन यस्ता कुराहरु सिकाएर पठाउँदैन ? नेपालमा एक्लै बसेको मान्छेलाई यहाँ आएर ४, ५ जना बच्चा स्याहार्न लगाइन्छ, अनि कसरी उसलाई सजिलो होला ? मलाई पनि पहिला देश विदेशमा कार्यक्रम गरेर हिँडिरहेको मान्छे यहाँ आएर बस्नुपर्दा त्यतिबेला अर्कै महसुस हुन्थ्यो ।
जबकी म आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने थिएँ । मेरो भविष्य खै त ? भन्ने प्रश्न आउँथ्यो मनमा । अहिले म मेरो संगीत यात्रालाई पनि निरन्तरता दिइरहेकी छु । मेरो एल्बम आउँदै थियो, कोरोनाको कारणले त्यो रोकिएको छ, अब बिस्तारै आउँछन् । पछिल्लो समय नेपाल गएर तीजको गीत निकालेको थिएँ । तर अहिले पहिलाको जस्तो संगीतमा सबै समय दिन सक्दिनँ । अहिले मसँग बच्चा छ, आफ्नो व्यवसाय पनि छ । यसैमा रमाइरहेको छु । उज्यालो अनलाईन बाट
राति हिटर र कोइला एकैसाथ बालेर सुतेका का’रण अक्सिजनको अभा’वमा सुत्केरी र शिशुको निसा’स्सिएर मृत्यु
युनाईटेड इन्स्योरेन्सको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा उपासना पौडेल नियुक्त
October 4, 2021 October 4, 2021 Nepali Surya